ओलीको दोस्रो प्रस्तावले साम्य भएन एमालेको ज्वरो: संकटमा एकता प्रयास, 'धर्मसंकट'मा माधव नेपाल !
पार्टी एकताका लागि ‘जेठ ३ पूर्वको अवस्था’मा फर्किने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावले नेकपा एमालेमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।
‘पार्टी जेठ २ बाट धेरै अघि बढेका’ले पुरानो अवस्थामा फर्किन नसकिने अडान राख्दै आएका ओली पहिलो पटक औपचारिक रूपमै ‘जेठ ३ पूर्वको अवस्था’मा फर्किन राजी भएको घोषणा गरे ।
तर, ओलीको प्रस्तावपछि पनि एमाले विवाद समाधान हुने सम्भावना भने देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघिसम्म नेपाल पक्षले जेठ २ (तत्कालीन माओवादीसँग एकता गरेर नेकपा गठन गर्नुपूर्वको अवस्था)मा फर्किने कुरालाई ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो । एमालेलाई जेठ २ कै अवस्थाबाट अगाडि बढाउन भन्दै दुवै तर्फका पाँच–पाँच जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन भयो ।
कार्यदलले काम गरेको भोलिपल्ट माधव नेपाल समूहले बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादीका साझा उम्मेदवार खिमलाल देवकोटालाई भोट हालेपछि कार्यदल भाँडियो ।
पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवार खडा गरेर आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध भोट हालेको भन्दै बिग्रिएको वातावरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि नेता नेपालसहितका नेताहरू पार्टीबाट निस्कासनमा परे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि नेता नेपालले ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्दै अन्यथा सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा गर्ने चेतावनीयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए ।
झण्डै एक महिनापछि ओलीले ६ बुँदामै खनाल नेपाल पक्षसँग एकताको अपिल गरे । ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ६ बुँदामै जवाफ फर्काउने निर्णय भएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले लोकान्तरलाई बताए ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पनि ओलीले अपिल प्रकाशित गरी पार्टी एकताका लागि भन्दै आह्वान गरेका थिए ।
'राम्रो निर्णय, तर ढिलो आयो'
यसअघि जेठ २ मा फर्किनु पर्ने निर्णयलाई एकसूत्रीय अडान बनाएको खनाल नेपाल पक्षले सोमवार स्थायी कमिटीको बैठकमार्फत ‘जालझेल र तिकडमले भरिएको’ भन्दै ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालका ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुरामा आफूहरू एक मत रहेको जिकिर गरे ।
आइतवार राति ओलीले वक्तव्य जारी गरेलगत्तै खनाल–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले स्वागत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखे ।
'नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको एकताका लागि आज सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत गर्नुभएको आह्वान मूलत सकारात्मक छ ।
कार्यदलस्तरको छलफललाई यो वक्तव्यले पुनः निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरू सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नुपर्ने र मिलाउनुपर्ने थप विषयहरूलाई समाधान गर्नेछ ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मूलत संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ । सारमा अध्यक्षको वक्तव्यले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वका बीचमा सार्थक संवाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्दछु । हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट नै शुरू हुन्छ ।'
‘हजार माइलको यात्रा एउटा पाइलाबाट शुरू हुन्छ’ भन्दै योगेशले ओलीको प्रस्तावको स्वागतमा केही शब्द लेखेको भोलिपल्ट खनाल–नेपाल पक्षका ४ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भूमिकाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो ।
सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेशले पार्टी एकता जोगाउन भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका थिए ।
बिहीवार र शुक्रवार भएको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको छलफलमा चार नेताले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
तर आइतवारको ओलीको प्रस्तावपछि खनाल नेपाल समूहको एउटा तप्का मूलधारमै फर्किन्छ भन्ने टीकाटिप्पणी चलेको थियो ।
त्यो टीकाटिप्पणी खण्डन गर्दै घनश्याम भुसालले आफूहरूविरुद्ध अनर्गल प्रचार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत पञ्चायतकालका सुकुलगुण्डाको प्रवृत्ति अहिले हाबी भइरहेको गुनासो गरे ।
'फेरि हाम्रा विरुद्ध अनर्गल प्रचार शुरू भएको छ । हामीले एकताको कुरा गर्दा त्यसलाई आत्मसमर्पणको रुपमा व्याख्या गर्ने र विवादको कुरा गर्दा विभाजनको रुपमा व्याख्या गर्ने एउटा समूह नै तयार भएको छ ।
पञ्चायत कालमा राजनीतिलाई विकृत बनाउने सत्ता संरक्षित समूह मण्डलेका रूपमा स्थापित भयो । पञ्चायत धराशायी हुनुमा त्यस समूहको कम्ती योगदान थिएन ।
त्यसबेलाका कतिपय पञ्चहरू नै त्यस समूहसँग आजित भएर संसदमै ‘सुकुलगुण्डा’ भनेर विरोध गरेको सम्झिन्छु । आज नेकपा एमालेको राजनीतिलाई विकृत बनाउन त्यस्तै समूह त खडा भएको छैन ? अनि परिणाम पनि त्यस्तै हुने त होइन ? धेरैजसो सपेराहरू सर्पबाटै टोकिएका छन् ।'
किन बिच्कियो नेपाल समूह ?
स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पार्टीलाई साँच्चिकै एकतबद्ध बनाएर लैजानेभन्दा विवाद टालटुल पारेको देखाउने किसिमले आएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो । ओली आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि पासा फालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।
‘ओलीको प्रस्ताव एकताको पक्षमा देखिएन, टालटुल पार्ने खालको भयो, जेठ २ मा फर्किने भनिएपनि नेकपाको एकता भएपछि थपिएका केन्द्रीय सदस्यलाई कायम राख्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन । भातृ संगठनको बारेमा पनि मूलभूतरूपमा भनिएको छ ? के हो त्यो मूलभूत रुपमा भनेको ?यसरी गोलमाल भाषाले हुँदैन,’ भुसालले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्को बुँदामा अब कारवाही गरिने छैन भनिएको छ, यसअघिको बारेमा बोलिएको छैन । यदि एकता गर्ने हो भने यसअघिको ६ बुँदेको आधारमा हुनुपर्छ ।’
खनाल नेपाल समूहका अर्का एक प्रभावशाली नेताका अनुसार ओलीले गरेको प्रस्तावमा ‘जेठ ३ पूर्व’को भनिएकाले आशंका जन्माएको छ ।
२०७१ सालको महाधिवेशनबाट बनेको स्थायी कमिटीलाई निरन्तरता दिने नभई नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समितिका एकता पक्षधरलाई भनेपछि शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।
‘जेठ ३ गते एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यलाई कायम राखेर आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्ने कोशिश भयो । फागुन २८ देखि चैत १० गते गरिएको भनिएको केन्द्रीय समितिको निर्णय यथावत राखेर कसरी सहमति जुट्छ ?’ ती नेताले प्रश्न गरे ।
मातहतका कमिटी र जनसंगठनलाई मूलभूत रूपमा जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काइनेछ भन्नुको अर्थ आफ्नो पक्षका संगठनलाई यथावत राख्न खोजिएको आशंका खनाल नेपाल पक्षको छ ।
‘मूलभूत भन्नुको अर्थ आफूले चाहेको संगठनलाई क्रियाशील बनाउने बाहेक के हुनसक्छ ? यस्तो अमूर्त भाषा किन ?’ खनाल–नेपाल पक्षका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
र, ओलीले अगाडि सारेको मुख्य शर्त आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । ‘असंवैधानिक ढंगले गरिएको विघटन सच्चाउनका लागि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइएकाले, प्रतिनिधि सभा विघटन ओलीले फिर्ता लिए हस्ताक्षर फिर्ता हुन्छ,’ भुसालले भने ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताको शर्तसहित ओलीको वक्तव्य आएको भोलिपल्ट नेता नेपालले बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अपराह्न देउवासँग भेट गरेर हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने अडानमा कायम रहेको बताएका छन् ।
जेठ २३ गते गरिएको ओलीको दोस्रो अपील अस्वीकार गरेपछि एमाले विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
हेर्नुहोस्, ओलीले गरेको आह्वान :